काठमाडौँ, २९ माघ । नेपालले आफ्नो तेश्रो खेलमा केन्यालाई ३ विकेटले हराएको छ । उसले दिएको १ सय ७८ रनको लक्ष्य नेपालले अन्तिम ओभरमा ७ विकेट गुमाएर भेट्टाउदै ३ विकेटको जित हात पारेको हो । जितसंगै नेपाल केही समयका लागि अंकतालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । र विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
काठमाडौँ, २९ माघ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत केन्याविरुद्ध नेपाली मध्यक्रमका व्याट्सम्यान जित निकाल्न कडा मेहनत गरिरहेका छ्न । पारस खड्का ४२ रन बनाएर आउट भएपछि जित निकाल्न मध्यक्रमका नेपाली व्याट्सम्यान कडा मेहनत गरिरहेका हुन् । क्रिजमा रहेका रोहित पौडेल र आरिफ शेख धेरै बल खेलेर थोरै रन जोडेपनि रन बटुल्न भने निकै मेहनत गरिरहेका छ्न । नेपालले…
सातौं इनोभेटिभ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु
काठमाडौँ २५ माघ । सातौं इनोभेटिभ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ । इनोभेटिभ इङलिस स्कुलको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा सिनियर ब्वाइज र गर्ल्स तथा जुनियर ब्वाइजमा प्रतिस्पर्धा हुने इनोभेटिभका प्रबन्ध निर्देशक अनन्त कुँवरले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । सिनियर ब्वाइजमा १६, सिनियर गर्ल्समा ८ र जुनियर ब्वाइजमा १२ टिमको सहभागिता रहने छ । सिनियर र जुनियर…
विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालको जित
काठमाडौँ,२५ माघ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले नामिवियामाथि एक विकेटको जित हात पारेको छ । एकसय ३९ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले अन्तिम ओभरमा ९ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टाएको थियो । नेपालका लागि बसन्त रेग्मीले २४ बलमा नटआउट २४ रन बनाउनु निर्णायक सावित भयो । पहिलो इनिग्समा सन्दिप लामिछानेले ४ विकेट लिएपछि नामिविया एकसय ३८ रनमा…
काठमाडौँ, २४ माघ । दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा रहेको भारतले आज तेश्रो एकदिवसीय खेल खेल्दैछ । यसअघिका दुई एकदिवसीय लगातार जितेको भारतले आजको खेल जिते श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पार्ने आधार बलियो बनाउनेछ । केपटाउनमा नेपाली अनुसार बेलुकी पौने ५ बजे शुरु हुने खेलमा भारत हावी हुने सम्भावना छ । चोटग्रस्त दक्षिण अफ्रिका संकटमा दक्षिण अफ्रिका मुख्य व्याट्सम्यानको चोटका कारण भारतविरुद्ध आज पनि…
वाजीको गोलमा पुलिसले जित्यो आहा–रारा गोल्डकप उपाधि
पोखरा, २० माघ । अतिरिक्त समयको १० औँ मिनेटमा राम वाजीले गरेको एक मात्रै गोलमा नेपाल पुलिस क्लब आहा रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि उचाल्न सफल भएको छ । पोखरा रङगशालामा आहा–रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको १६ औं संस्करणको उपाधि पुलिसले जित्दा गत हप्ता मात्रै मनाङलाई हराउँदै इटहरी गोल्डकप उपाधि जितेको थ्रीस्टार भने स्तब्ध बन्यो । निर्धारित समयमा दुबैतर्पmबाट कुनै पनि गोल…
दक्षिण अफ्रिकी टोली संकटमा ! घाइते डिभिलियर्सपछि डुप्लेसिसपछि पनि आउट !
एजेन्सी, माघ २० । एबी डिभिलियर्स चोटकै कारण टिम बाहिर रहेका बेला उसका कप्तान फाफ डुप्लेसिस पनि टिम आउट भएपछि दक्षिण अफ्रिकी टोली संकटमा परेको छ । बलियो टोली भारतसंगको ६ वटा एकदिवसीय खेलिरहेको अफ्रिकी टोली एकपछि अर्को संकटमा परेको हो । पहिलो एकदिवसीय गुमाईसकेका बेला थप दबाबमा परेको अफ्रिकी टोलीमा अब हार स्वीकार्नु बाहेक अरु विकल्प छैन् । शतकका…
काठमाडौँ, १९ माघ । कप्तान विराट कोहलीको शानदार शतकमा भारतले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट खेल ६ विकेटले जितेको छ । दुरबानमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले दिएको २ सय ७० रनको लक्ष्य भारतले ४५ ओभर ३ बलमा ४ विकेट गुमाएर भेट्टायो । धोनीले ४५ ओभरको तेश्रो बलमा चौका हान्दै भारतलाई जित दिलाएका हुन् । धोनी ४ र हार्दिक पाण्ड्या ३ रनमा…
आहा रारा गोल्डकपको उपाधिका लागि पुलिस र थ्रीस्टार खेल्ने
पोखरा, १९ माघ । १६ औँ आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र थ्रीस्टार क्लब खेल्ने भएका छन् । पोखरा रङ्गशालामा बिहीबार भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा धरान फुटबल क्लब सुनसरीलाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । यसअघि बंगलादेशको उत्तर बरिन्धरा क्लबलाई ५–० ले हराउँदै थ्रीस्टार फाइनलमा पुगेको थियो । खेलमा पुलिसका सुमन…
काठमाडौँ, ९ माघ । मोटो रकम तिरेर म्यानचेष्टर युनाइटेडले आर्सनलका स्ट्राइकर एलेक्स साञ्चेजलाई क्लवमा ल्याउन सफल भएको छ । युनाइटेडले साञ्चेजको बदलामा हेर्निख मखितर्यानलाई आर्सनलमा पठाएको छ । उनी साञ्चेजकै उमेरका भएपनि निकै कम गोल गरेका छन् । साञ्चेजले कर बाहेक १ करोड ४० लाख पाउण्डमा साढे ४ वर्षको सम्झौता गरेका हुन् । सन् २०१४ मा स्पेनिस क्लव बार्सिलोना छाडेर…
एजेन्सी, २ माघ । टेस्ट क्रिकेटको नम्बर एक टिमलाई स्पष्ट जित चाहिएको छ । र उसले आफु विश्वकै उत्कृष्ट टिम हुँ भन्ने दाबी गर्छ भने दक्षिण अफ्रिकासँग जस्तोसुकै परिस्थिती भएपनि हार मान्नु हुदैन् । तर सन् २०१४ पछि भारतलाई यही नमुना बनाएका विराट कोहली दोश्रो इनिङमा ५ रनमै आउट भएपछि भारत हारतर्फ उन्मुख भएको छ । २ सय ८७ रनको…
एजेन्सी, २ मंसिर । अरु कुनै पनि व्याट्सम्यानले अर्धशतक बनाउन नसकेका बेला कप्तान विराट कोहली एक्लैले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको दोश्रो टेस्टको पहिलो इनिङमा १ सय ५३ रन जोडे । अपसोच ! उनको करियरको २१ औँ टेस्ट शतकले भने भारतलाई फ्लोअनबाट जोगाउन सकेन् । टिमको स्कोर ३८ रन हुँदा नै दुई विकेट गुमेको अवस्थामा क्रिजमा आएका कोहली अन्तिम विकेटको रुपमा आउँट हुँदा…
धनगढी, १ माघ । ‘नेपाल आइस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ । स्थानीय रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनल खेलमा अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबलाई आर्मीले विजय प्राप्त गरेको थियो । निर्धारित समयमा कुनै पनि टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको नतिजा पेनाल्टी सुटआउटमार्फत् निकालिएको थियो । आर्मीले एपिएफलाई पेनाल्टी सुट आउटमा…